Uyisebenzisa kanjani iTwitter | Martech Zone
NgoLwesibini, Agasti 9, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 Douglas Karr
Ngaphambi kokuba uhlekise ngale infographic, namhlanje nje ndisebenze nomthengi osidinga nyani isicwangciso sokusebenza ne-Twitter. Ndicinga ukuba le infographic ibonelela ngengcebiso evakalayo kubantu abaneengcebiso ezilungileyo kuyo yonke. Ngokumalunga nesicwangciso seshishini kwishishini (B2B), ndicebisa ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo zabaxhasi bam:
Okokuqala, ndincoma ukuba balandele iinkokheli ku-Twitter kwishishini labo, Qalisa incoko kunye nabo, ukhuthaze ii-tweets zabo xa ithuba livela, kwaye wakhe ubudlelwane kunye nabo kwi-intanethi. Bambalwa kakhulu abantu abanokujoyina i-Twitter kwaye bafumane abalandeli aboneleyo ukuba baxhamle ngokukhawuleza ekusebenziseni. Abanye bethu, kufuneka samkelwe ngoontanga bethu kwaye saziswe kwiinethiwekhi zoontanga bethu. Phantse abalandeli be-29k, yiyo loo nto ndizama ukuthathela ingqalelo ukukhuthaza abanye! Umntu othile wayenza xa ndandinezimbalwa!
Okwesibini, ndincoma ukuba landela ithemba labo. Njengoko ukhulisa isiseko sakho sethemba kwi-Twitter, kuya kubakho amathuba nangakumbi okunxibelelana nabo. Awusoze wazi ukuba xa ithemba liza kudinga uncedo lwakho kwi-Twitter… yibakhona xa bekucela!
Enkosi kubantu kwi IiTwiend ngenxa ye-infographic enkulu!
Ngaba uPhuhliso luyinxalenye yoHlahlo-lwabiwo mali lweNtengiso?